Ịhịa aka n'ahụ anya
Igwe nkpuchi eletrik
Oche ịhịa aka n'ahụ
Ịhịa aka n'ahụ maka ndị agadi: uru, nlezianya, ụgwọ, wdg.
Ịhịa aka n'ahụ Geriatric bụ ọgwụgwọ ịhịa aka n'ahụ maka ndị agadi. Ụdị ịhịa aka n'ahụ a na-eburu n'uche ọtụtụ ihe na-emetụta ịka nká nke ahụ, gụnyere ahụike zuru oke nke mmadụ, ọnọdụ ahụike, na ịṅụ ọgwụ. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha otú ịhịa aka n'ahụ agadi nwere ike isi baara gị uru ...
Ndị omebe iwu Alaskan Conservative na-ege ntị n'echiche ndị ntuli aka na ivermectin, ụkpụrụ ọgwụ mgbochi, izu nzuzo Fauci
Na nnọkọ na Churchka Baptist Anchorage na Mọnde, ọtụtụ ndị Alaskan nwere nkụda mmụọ na iwe maka mmachi ọrịa, ọgwụ mgbochi COVID-19 na ihe ha kwenyere bụ ọgwụgwọ ọzọ nke mpaghara ahụike iji gbochie nje a. N'agbanyeghị na ụfọdụ ndị na-ekwu okwu tụlere nkata...
Ihe egwuregwu ụmụaka eletrik nwere ụkwụ atọ na Walmart maka naanị US$59.99 (ọnụahịa izizi US$139.99) :: WRAL.com
Ọ bụrụ na ị na-eji netwọk mmekọrịta iji banye na WRAL.com mbụ, biko pịa njikọ "chefuru paswọọdụ" iji tọgharịa paswọọdụ gị. Ọkà mmụta sayensị Triangle na-anata onyinye nkwanye ugwu kachasị elu nke North Carolina maka nyocha Coronavirus FOX 50 na 10: "Anyị nwere ndị ntorobịa na-anwụ." Dị ka nọmba ...
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara iji jed rollers na ihu gị
O nwere ike ịbụ na ị hụla ka a na-atụgharị roller jed na mgbasa ozi ọha na YouTube ka ọ bụrụ ihe ngwọta maka ọrịa sitere na akpụkpọ anụ ahụ na-afụ ụfụ ruo na drainage lymphatic. Dendy Engelman, MD, onye dọkịta na-ahụ maka ọrịa anụ ahụ nwere akwụkwọ na Shafer Clinic na New York City, kwuru na rola jede nwere ike ịkwanye oke mmiri na…
Nigel Topping: "Enwere ụfọdụ oke ehi ** t. Mana ọ bụ ihe nzuzu ịkpọ ihe niile dị ka “ịsacha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ”.
Ndị na-akwado ihu igwe dị elu nke UN kọwara "mgbanwe ọchịchọ" nke na-eme ka ụlọ ọrụ mee ihe na ihu igwe. N'iji eriri #ShowYourStripes ya na ihe nkpuchi, yana ndị na-agba ọsọ na-acha anụnụ anụnụ na oroma, Nigel Topping pụtara iche na igwe mmadụ. Ụbọchị tupu m a gbara ya ajụjụ ọnụ na Cop26, Topping soro Al Gor ...
Top 3 kacha mma ikuku ikuku robot nwere mmefu ego na-erughị $300 (2021): IRobot, Roborock, ndị ọzọ
Nke a bụ ụfọdụ ndị na-ehicha ikuku robot kacha mma nwere mmefu ego na-erughị $300 na 2021, gụnyere IRobot, Roborock, wdg! Ndị na-ehicha ikuku robot na-eme ka ihicha ọrụ ụlọ dị mfe, n'ihi na ha nwere ike ime ka ala ghara inwe ntụpọ na-enweghị ọsụsọ. Ọ bụghị ikwu na ha nwere ike ime nke ọma n'ihi na th ...
Denver Beer Spa na-ebupụta biya na mmanya nke onwe ya
The Beer Spa site Snug ga-emeghe n'izu na-abịa, na iri na-arụ ọrụ faucets kwadoro site iPourIt technology Denver, Colorado — Snug's Beer Spa bụ a ọhụrụ ahụike spa na-enye biya bath ọgwụgwọ na ga-emeghe n'izu na-abịa na Denver's Five Point Community. Ụlọ spa ahụ gụnyere ọgwụgwọ biya anọ nkeonwe ...
Ihe nkpuchi ihe nkpuchi nwere ike imebi, ịrụ ọrụ nke ọma na iku ume-Choi-2021-Sayensị dị elu
Ịhịa aka n'ahụ Lymphatic: kedu uru ya na olee otu o si arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ị na-ege ntị na ihe niile a na-akpọ nkwupụta ahụike, ịhịa aka n'ahụ lymphatic dị ka nhọrọ nke abụọ kachasị mma maka isi iyi nke ntorobịa. Ọ na-eme ka akpụkpọ ahụ gị na-egbuke egbuke! Ọ nwere ike belata mgbu na-adịghị ala ala! Ọ na-ebelata nchekasị na nchekasị! Okwu ndị a hà bara uru? Ka ọ bụ naanị ụyọkọ hype? Nke mbụ, bayoloji ngwa ngwa ...
adreesị:B25, ogige ụlọ ọrụ carbon dị ala, 400 Xincheng Avenue, Zengcheng District, Guangzhou
© Nwebiisinka - 2011-2021: Ikike niile echekwabara.
Oghere Robot bara uru kacha mma, Oche ịhịa aka n'ahụ, Oche ịhịa aka n'ahụ efu, Ngwaahịa ahụike n'ogbe, Oche ịhịa aka n'ahụ ama ama, Ọcha Anya Massager,